[OKUFANELE] Idatha yokuhlanza i-DataKit iPhone - Sula idatha ye-iPhone bese Susa ubumfihlo
Idatha yokuhlanza i-DataKit iPhone
Free Up i-iOS yedivaysi ngokuchofoza okukodwa.
Sula Yonke Idatha - Susa Amafayili we-Junk namafayela wesikhashana ukusheshisa i-iOS.
Ung Khetha Yikuphi Uhlobo Ledatha Ofuna ukulususa.
Sula imininingwane eyimfihlo ukuze Uphephe.
Cindezela izithombe ukuze ukhulule isitoreji esithe xaxa.
Ithole manje Win Landa Ukulanda i-Mac Thola Isilingo Samahhala nge-imeyili Yokulanda Kamuva Kukhompyutha
Sula Yonke imininingwane Yangasese Ukuze Uzivikele
Sigcina imininingwane yethu yasebhange, i-akhawunti yokungena ngemvume, ama-imeyili, oxhumana nabo kanye nezitho zeminwe ku-iPhone. Uma ufuna ukuyilahla noma ukuyithengisa kwabanye, kufanele ususe zonke izinto ngasese ngokusetha kabusha i-iPhone yakho, ngenkathi ngethuluzi lokuthola umuntu wesithathu, idatha esusiwe ingabuyiselwa, okusobala ukuthi izokulethela inkathazo. Ngakho-ke, kufanele uqiniseke ukuthi labo obasusile abakwazi ukutholakala. Ukuze wenze lokho, udinga i-iPhone Data Cleaner ukusula i-cache yefoni, ukukhulula isitoreji nokususa yonke idatha kwifoni yakho. Futhi-ke ukhululekile kunoma yiziphi izigebengu ezingaba khona ezithola imininingwane yakho.
Susa Konke ku-iPhone
Ungasusa futhi ususe yonke idatha ku-iPhone yakho kufaka phakathi oxhumana nabo, imilayezo, umlando wekholi, amanothi, izithombe, ikhalenda, isikhumbuzi, i-bookmark nokuningi. Ukuchofoza okukodwa kanye ne-iPhone yakho kuzobuyela osukwini lokwethula ibhokisi. Uma uvele nje ufuna ukususa ezinye izinhlobo zedatha, ungazikhetha ukuze uzisule bese ugcina ezinye ku-iPhone.
Hlanza Inqolobane futhi Usheshise i-iPhone / iPad yakho
Amafayela we-Junk, amafayela wesikhashana, i-cache yohlelo lokusebenza (izithombe, imininingwane yamalogi), i-web cache, amakhukhi nedatha engaphezulu kuzothatha isikhala esikhulu sememori yakho yangaphakathi ye-iPhone / iPad esikhaleni esizokwehlisa i-iPhone / iPad yakho ngokushesha. Sebenzisa i-iPhone Idatha yokuhlanza, unga:
Susa yonke inqolobane yohlelo lokusebenza, ukulondolozwa kwesikhashana kwewebhusayithi, amakhukhi ngokuchofoza okukodwa.
Susa amafayela amakhulu, amafayela angenampilo kanye nezilondolozi ezikhiqizwe ngohlelo.
Shesha i-iPhone yakho / i-iPad futhi wenze idivayisi yakho isheshe futhi ibushelelezi.
Cindezela Ikhwalithi Yezithombe Kanzima
Kufanele kube isithombe esithatha isitoreji esiningi ku-iPhone yethu ikakhulukazi kulabo abathanda i-iPhone enezithombe. Ukuze ushiye isikhala esithe xaxa sokusebenzisa, udinga ukudlulisa izithombe zisuka ku-iPhone / iPad ziye kwiKhompyutha ukuthi ungafinyelela kanjani kuzo ngokukhululekile. Nge-iPhone Data Cleaner, unga:
Thumela izithombe kukhompyutha ukuze zilondolozwe noma zigcine isipele.
Cindezela izithombe ngokungapheleli ku-iPhone ukusindisa isikhala esithe xaxa kudivayisi ye-iOS.
I-iPhone Cleaner ehamba phambili kwi-Windows naku-Mac
Sula Idatha ku-iPhone, i-iPad Manje!
I-iPhone Data Cleaner isusa unomphela idatha yobumfihlo ku-iPhone, i-iPad, ne-iPod futhi yenze leyo datha ingatholakali ngokufaka idatha ngentambo engenanjongo.
Uma i-iPhone yakho ingenayo isitoreji esanele, yehluleka ukukhuphula i-iOS ngenxa yesikhala esiphansi noma imane nje iqhwale lapho usebenzisa, ungahlala ukhulule isikhala ngaleli thuluzi.
Kuyinto ehlanziwe yedatha yokuhlanza i-iPhone, Sula yonke idatha, sula amafayela asusiwe, Sula idatha yangasese, Shesha i-iPhone, isithombe seCompress, noma isithombe se-Export kukhompyutha.
Ungasusa Kanjani Imilayezo Ye-Facebook ku-iPhone, Android, noma Chrome
Ungawususa Kanjani Umyalezo we-WhatsApp kusuka ku-iPhone ne-Android
Ungasusa kanjani amabhukumaka ku-iPhone, i-Android, kanye ne Chrome
Amakhasimende Abuye athande
Isipele sedatha ye-iPhone / i-iPad kwikhompyutha futhi ubuyisele idatha kusuka kusipele kamuva nge-Isipele sedatha ye-iOS & Buyisela.
Yakhelwe ukulungisa i-iPhone ekhubazekile, efriziwe noma eqhoqhoqhowe njengejwayelekile. Susa imodi yokutakula, imodi ye-DFU noma isikrini esibomvu / esimnyama / esimhlophe / esiluhlaza okwesibhakabhaka.